Kulan Android waxa ay noqonayaan aad loo jecel yahay ka mid ah dadka haatan. Iyadoo kulamo badan android suuqa daadad, waxaad si fudud u heli karaan qasan oo ka mid ah in la doorto. Si kastaba ha ahaatee haddii aad raadinayso kulan Galaydh markaas waxaad ku farxi doonaan in liiskan kulan Galaydh in si gaar ah loo diyaariyey ciyaarta Galaydh ku caashaqa oo ka adduunka oo dhan. Sidaas download, kuwaas oo kulan ka dukaanka app iyo bilowdo ciyaaro!
1.Contract Killer: toogte
Heshiiska Killer waa ciyaar toogashada aad loo jecel yahay. Kulankaan android ayaa qaababka badan oo xiiso leh meesha aad door ka mid ah dilaaga heshiis. Aad heshiis iyo hub Waxaad dooran kartaa. Muuqaalada ee ciyaarta waa arrin wanaagsan iyo saamaynta dhawaaq weyn u baarto si ay u siiyaan kulankaan u dareento macquul ah. Kulankaan android gabi ahaanba waa bilaa lacag oo aad si fudud u soo bixi kartaa ka dukaanka Play Google.
Kulan An orodka kama dambaysta ah, mara Surfers waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan kulan android laga helo suuqa hadda. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay tiro ka mid ah avatars iyo aad u leeyihiin in ay dhex caqabado ah inay shabaqa qodobada ugu badnaan. Waxaad ku xidhi karaa ciyaarta, iyada oo aad profile shabakadaha bulshada iyo u yeedhin saaxiibbadaada ama iyaga ka doodid.
Haddii aad u jecel yihiin tallaabo, markaas gaajoodeen, Shark Evolution waa ciyaarta ugu fiican android aad u! Si ay u badbaaddo ee ciyaarta, waxaad u baahan doontaa inuu cuno wax walba in uu helo jidkiinna. Muuqaalada saddex geesood ah, kala duwan oo ka mid ah galayaan iyo codad macquul caawiyo in la abuuro jawi ku fiican. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa kulan aad la leedahay isku xirka profiles bulshada.
Careysan Gran Run Waa kulankii android in u ku imtixaamaa xirfadaha orodka aad. Ilaa intee kuu soo ordi karo oo aan istaagin? Kulankaan ayaa daba noqonayaa goob xiiso leh halkaasoo awow hooyo ah ayaa iska xiran doonka ah. Si kastaba ha ahaatee ku baxsado awow hooyo iyo tani waa meesha imtixaanka socda bilaabi. Xor baad u tahay in ay sii wadaan waddooyinka New York iyo yareyso wax walba in uu helo jidkiinna. Kulan An orodka kama dambaysta ah, aad ugu dhakhsaha badan u hesho qabatimayaan this ciyaarta android lacag la'aan ah.
Kabsato jajabkii hadhay oo dhan aad xorriyaadka la this ciyaarta android bood booda jajabkii hadhay. Sida aad barbareeyo ilaa ciyaarta, aad tagayso si ay u sahamiyaan tiro ka mid ah muuqaalada laga heli karo ciyaarta. Waxaa jira tiro ka mid ah jilayaasha iyo aad qaadan kartaa lacagta birta ah iyo lacagihii ciyaarta oo dhan. Kulankaan android gabi ahaanba waa bilaa lacag.
Sida kaliya si ay u noolaadaan in kulankaan waa in ay ku boodaan sare! Waxaad si loo badbaadiyo gele adigoo iyaga ku boodaan sare. Waxaad ku xidhi karaa ciyaarta, iyada oo aad bulshada profiles iyo ka doodid saaxiibadaa in aad ku biiri madadaaladan ciyaarta.
Sky Force War lagu qiimeeyaa mid ka mid ah ugu wanaagsan kulan dagaal android dukaanka app. Ujeedada kulanka uu yahay mid aad cadaawayaashiinna oo isticmaalaya hubka ugu horumarsan heli karaa garaacday. Tani waa tallaabo kulan classic ka buuxaan waxyaabo badan oo ah maroojin. Waxaad inay ku farxi doonaan in ay ogaadaan in kulanka ficilkan oo gebi ahaanba bilaash ah. Sidaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa kala soo bixi kulankaan oo ku xidh ah ee aad taleefan si aad u bilowdo si degdeg ah!
Iyadoo characters Kuuriya oo u dhaqaaqdo qoob ka PSY gaar ah, Crossy Road waxa uu noqday mid ka mid ah kulamada ugu xiiso leh dukaanka play ah. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa dabeecadda PSY iyada oo lagu iibsado in-app. Waxaad ma ciyaari karaan oo keliya kulankaan ku saabsan telefoonka smart android laakiin ciyaarta ayaa sidoo kale la jaan qaada Android TV. Waxaad badbaadin kartaa kulan la dukaanka Google Play, soo celinta horumarka iyo xiriiriyaan profiles bulshada ciyaarta.
Haddii aad raadinayso ah ciyaarta toogashada wanaagsan, ka dibna GunFinger laga yaabaa in doorasho wanaagsan ee aad u! Kulankaan ayaa gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha iyo aad si fudud u soo bixi kartaa ka dukaanka Play Google. Waxaa jira qaar ka mid ah muuqaalada ee ciyaarta iyo hadii aad tahay ciyaaryahan si joogto ah markaas aad u jeclaan doonaa caqabadaha maalin kasta la bixiyaa.
10.Asphalt 8: hawada
Dadka jecel kulan tartanka baabuurta, Asphalt 8 waa wax aan ka yarayn barako iyaga u. Muuqaalada ka xoogbadan, iyo codad ay la socdaan gaadiidka sare sameeyo ciyaarta qiimihiisu ciyaaro.
> Resource > Emulator > Top 10 Best Android Hack Games